Gbasara Anyị - OMySimba-Huizhou Melikey Technology Co., Ltd.
OEM / ODM ọrụ nkwụsị
Ngwaahịa anyị gụnyere ụmụ bebi mmekọahụ, ihe egwuregwu ụmụaka gụnyere ndị na-eme mkpọtụ, dildo, ihe egwuregwu ụmụaka, mgbanaka amụ na ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM & ODM ahaziri maka ndị nhazi.
Anyị nwere usoro klas mbụ na usoro njikwa njikwa siri ike nke na-eme ka nnyefe oge.
Na anyị ego gị bụ mma azụmahịa gị ga-nwetara.
OMySimba Team amụrụ iji nye ngwaahịa dị elu iji baara gị uru, iji nye ndị ahịa OEM / ODM dị ogologo oge ọrụ zuru oke, ma jiri obi ha niile na-enyere gị aka inweta uru na ụlọ ahịa. Ngwaahịa anyị gụnyere ụmụ bebi mmekọahụ TPE, ihe egwuregwu ụmụaka gụnyere wand massagers, ndị na-eme mkpọtụ, ụdị dildos, ụdị egwuregwu ụmụaka, mgbaaka amụ, bọọlụ ben wa, ndị na-eme prostate, ndị masturbators, na ndị ọzọ.
Anyị nwere ụkpụrụ siri ike maka akụrụngwa, silicone ahụike + ABS na-eme ka ngwaahịa ndị ahụ nwee nchekwa ma dị mma. Anyị na-ahọrọ motọ kacha mma na batrị maka ihe egwuregwu ahụ iji nye gị nchekwa dị ogologo na ogologo oge.
Dị ka emeputa, anyị na-eji ihe ndị kachasị mma ma tinye ọtụtụ echiche n'ime ihe egwuregwu anyị - iji jide n'aka na ha na-ewere ihe dị elu ma ghara ịdọpụ uche gị na ntụrụndụ.
Ihe egwuregwu anyị ji agba dị iche iche wee nwee ụdị na nha niile. Ha na-eguzo maka nnwere onwe, egwuregwu, na agụụ mmekọahụ - maka ụdị mmekọahụ ọ bụla, okike, na nghazi - ma ị nọ naanị gị, ọnụ, n'ihe ndina, n'ihe ịsa ahụ, ma ọ bụ n'ụgbọ ala. Ihe dị mkpa bụ inwe mmetụta dị mma, obi ụtọ, na ịnụ ụtọ ya.
Enwere ọtụtụ ụzọ iji gbanye. Ọ bụ ya mere anyị ji eme ọtụtụ nhọrọ nke ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị! Anyị na-atụ anya inyere gị aka inyocha ọchịchọ gị, gbanwee omume gị, ma nọrọ na njikere maka ihe ọhụụ. Anyị na-eguzo maka ihe eji egwuri egwu nwoke na nwanyị na-eme karịa inweta nyocha dị mma, anyị chọrọ imeju gị n'ụzọ ọ bụla. N'ihi na ndụ dị mkpụmkpụ inwe mmekọahụ na-atọ ọchị.
Enwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ihe atụ, iwu ahịa, ịwepụ ma ọ bụ ọrụ omenala. OMySimba Team na-enye ọrụ na ngwaahịa kachasị mma maka azụmahịa gị ma ọ bụ iji onwe gị.
Anyị bụ ndị nwere ahụmahụ emeputa nke a na ubi nke mmekọahụ na ngwaahịa maka 8 afọ.
MGBE E DIERE
51-100 Ndị mmadụ
N'okpuru US $ 1 Nde
TOTAL Kwa Afọ